रसुवाको पानी जसले मेटाउँदैछ चीनदेखि खाडीसम्मको तिर्खा - News From Nepal
हामी मिनरल वाटरु भनेर बोतल र जारमा बन्द प्रशोधित पानी खान्छौं नि यस्तो पानी सहरी क्षेत्रमा होस् कि ग्रामीण बजारमा, सर्वत्र पाइन्छ।
नेपालकै प्रशोधित पानी विदेश पनि निर्यात हुन्छ। यस्तै एउटा व्यावसायिक कम्पनी हो रुद्रगंगा नेचुरल वाटर प्रा. लि.
यसको प्रशोधन कारखाना रसुवाको धुन्चेमा छ। कम्पनीलेुरसुवा नेचुरल स्प्रिङ वाटरु नाममा प्रशोधित पानी विदेश निर्यात गर्छ। कम्पनीले यसलाई संक्षेपमा ुरसुवा ब्रान्ड भन्ने गरेको छ।
ुएक वर्षमा ४० हजार लिटर पानी चीन पठायौं, अध्यक्ष भण्डारीले भने।
कम्पनीले ३३० मिलिलिटर ९एमएल०, ५०० एमएल र एक लिटर परिमाणका बोतलमा तथा १९ लिटरको जारमा पानी प्याकेजिङ गरिरहेको छ।
दक्षिण चीनमा नेपाली पानीको व्यापार राम्रो भएको भनेर आफूले बधाइपत्र पाएको पनि भण्डारीले बताए। उनले भने, ुनेपालको नाम राख्ने र चीनको माग पूरा गर्ने गरी उत्पादन बढाउन कन्सुलर हरिशरण पुडासैनीले पत्र पठाउँदा हाम्रो हौसला बढेको छ।ु
ुपानीको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा देखेर कतारीहरू चकित भए,ु भण्डारी भन्छन्, आहा, पानी पनि यस्तो भनेर उनीहरू अचम्ममा परे।
सन् २०२० मार्च २७ र २८ मा कतारको दोहामा वर्ल्ड एग्रिकल्चरल एक्जिभिसन थियो। त्यहाँ नेपालका ६ वटा कम्पनीले निःशुल्क स्टल पाएका थिए। तीनमा रसुवा पानी पनि थियो। कोरोना संक्रमण फैलिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि सहभागिता हुन सकेन।
भण्डारी भन्छन्, विश्वकपमा पुग्यौं भने राम्रो मार्केटिङ हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यहाँ स्थान पाउँछौं कि भन्ने अपेक्षा छ।
भण्डारी भन्छन्, हामी कारखाना मूल्यमा पठाउँछौं। जुन मुलुकमा गए पनि एउटै मूल्य हो।
ुनेपालको पानी राम्रो प्याकेजिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्यौं भने एकातिर आम्दानी हुन्छ, अर्कातिर नयाँ उद्योगीले मौका पाउँछन्,ु भण्डारी भन्छन्, सरकारले निर्यातमा जोड दिएको छ। बढाउन सक्यौं भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।
ुत्यो बेला सरकारले नेपालको पानी खाडी निर्यात गर्ने नारा ल्याएको थियो। सोहीअनुसार हामीले उत्पादन सुरू गरेका हौं,ु भण्डारीले भने, विदेश पठाउनुअघि नेपालीले हाम्रो उत्पादन चिन्नुपर्छ भन्ने सोचेर नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यौं।
भिजिट नेपाल वर्ष २०२० को तयारी हुँदै गर्दा कम्पनीको आग्रहमा सरकारले यसलाई अफिसियल वाटरको मान्यता पनि दियो। रसुवा ब्रान्ड पर्यटकका लागि ुवेलकम वाटर छानिएको थियो।
भण्डारी भन्छन्, जारमा हामीले सेवामुखी काम मात्र गरिरहेका छौं।
ुरसुवा ब्रान्डको प्याकेजिङ प्रिमियम भएका कारण केही महँगो पर्छ, उनले भने, धुन्चेमा प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर ढुवानी गरेको पानी काठमाडौं वरपरको भन्दा केही महँगो पर्न जान्छ।
ुयहाँको पानी काठमाडौंमा र अझ चीन, अस्ट्रेलिया र खाडीसम्म पिउन पाउनु चानचुने कुरा होइन, भण्डारी भन्छन्, यो पानीमा हाम्रो धेरै मेहनत परेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालको पानी पिउन पाउनु गौरवको कुरा हो।ु
ुरसुवा स्प्रिङ वाटर लेकको मीठो पानी हो, उनी भन्छन्, सबै उमेरका व्यक्तिले पिउन मिल्छ। पिएच ६.५ देखि ७ सम्म छ। क्याल्सियम, म्याग्नेसिम र जिंक सबै प्राकृतिक छ।
रुद्रगंगा नेचुरल वाटर नाम मूलको नामको आधारमा राखिएको हो। त्यहाँको मुख्य मूलको नाम रुद्रधारा हो।
रुद्रगंगा नेचुरल वाटर प्रालिबाट कसरी कसरी सुरू भयो त रसुवा नेचुरल स्प्रिङ वाटर
रसुवाका सानतेम्पा तामाङले २०६६ सालमा मूल दर्ता गराएका थिए। केहीपछि घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता गराएर हिल टपु नाममा स्थानीय बजार स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमा पानी पुर्‍याए। बिस्तारै काठमाडौं पनि पुग्न थाल्यो।
उनीहरूले कारखाना सुधार र विस्तार गरे। रसुवाको पानी बिक्री गर्ने भएकाले रसुवाकै नाम प्रख्यात होओस् भन्ने उद्देश्यले पानीको नाम रसुवा राखिएको उनी बताउँछन्। रसुवा पानीको बोतलमा संकटापन्न जनावर रेडपाण्डा, लाङटाङ हिमाल र गोसाइँकुण्डको चित्र अंकित गरेर सेभ द रेड पाण्डा लेखिएको स्टिकर छ।